Fandikana fepetra :: Ambenan’ny polisy ny fivarotana iray eny Andohantapenaka • AoRaha
Voatery nametrahana andiana polisy miambina, nanomboka afak’omaly, manoloana ny fivarotana iray mpamongady zava-pisotro eny Andohantapenaka noho ny tsy fanarahana ny fepetra amin’ny tsy fahazoana mivarotra. Nisy ny fampitandremana nataon’ny polisy tamin’ny tompon’andraikitra ao amin’io fivarotana io saingy nanohy nanokatra ny tsenany hatrany izy. Maro ny olona mitangorona maka entana ao aminy ka niafara tamin’izao fandraisan’ny mpitandro ny filaminana fepetra hentitra izao.
Efa nisy ihany koa ny fisamborana nataon’ny polisy tao amina toeram-pisotroana iray teny amin’iny faritra 67 Ha iny noho ny fandikana fepetra amin’ny tsy fahazoana mivarotra. Nentina natao famotorana ny vehivavy iray mpivarotra sady tompon’io toeram-pisotroana io.
Ampatsiahivina foana fa ireo mpivarotra ambongadiny sy mpivarotra enta-madinika ilaina amin’ny fiainana andava­nandro (PPN) irery no mahazo alalana mivarotra, manomboka amin’ny 6 ora maraina hatramin’ny 12 ora antoandro.
Fanafihana sy halatr’omby :: Tovolahy maty voatifitry ny dahalo
Lozam-pifamoivoizana :: Lehilahy maty, avy noentin’ ny miaramila tamin’ny môtô